Trano safari manokana natokana hisokatra ao amin'ny Valan-javaboary Kruger
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Trano safari manokana natokana hisokatra ao amin'ny Valan-javaboary Kruger
New York - 5 Novambra 2018: Nanambara ny Royal Portfolio fa ny The Farmstead, trano fialofana safari manokana ao amin'ny Royal Malewane - fananana voalohany an'ny Royal Portfolio - ao amin'ny Greater Kruger National Park any Afrika Atsimo dia hisokatra ny 1 mey 2019.
Taorian'ny fanavaozana ny trano fialofana safari Royal Malewane izay vao tsy ela akory izay, dia eo an-dalam-panamboarana izao no atao ao amin'ny The Farmstead, lalana 12 minitra atsimon'ny trano fisakafoanana misy. Liz Biden, tompon'ny The Royal Portfolio izay namolavola sy nandravaka ny atiny rehetra ao anatin'ny fanangonana, dia efa nahazo ny ankamaroan'ny fanaka eclectic sy zavakanto tany am-boalohany ho an'ny trano fialofana vaovao. Raha nilaza ny fomba tsy manam-paharoa i Liz Biden dia nilaza hoe: "Andraso ny hazo terebinta maivana, ny roaka vita amin'ny vifotsy, ny vy vita amin'ny volon'ondry ary ny volon'ondry manga sy fotsy miaraka amina volon'ondry manga, indigo ary turquoise izay mandravaka ny lambam-boninkazo misy sofa mamy amin'ny veranda lehibe."
Ny trano fonenana ao amin'ny The Farmstead dia ahitana ny Suites Luxury Farm telo sy The Farmhouse - trano misy efitrano fatoriana misy efitrano fatoriana misy efitrano fatoriana efatra misy serivisy natokana ho an'ny mpivarotra, mpanampy, mpikarakara tokantrano, fiara safari, ranger ary tracker. Ny faritry ny trano fandraisam-bahiny lehibe dia hanana efitrano fitsaboana spaoro roa, gym, lavaka afo ary tokotanin-tsambo malalaka ahafahan'ny vahiny miala sasatra sy misakafo rehefa mijery ny bibidia be dia be mitsidika ny lavaka rano mifanila aminy.
The Farmstead dia hanolotra traikefa safari miavaka amin'ny ekipa mpitari-dalana tena mahay any Afrika ary koa serivisy sy sakafo tsy misy kilema izay nandrasan'ny vahiny nandritra ny 20 taona mahery tao Royal Malewane. Ny sarany dia ahitana trano, fisakafoanana, zava-pisotro, kapila lalao ary fitsangatsanganana an-tsaha.
Ny Farmstead dia mitantara tantara iray manan-danja amin'ny fanatsarana ny fiaraha-monina any Afrika. Royal Malewane dia nanaiky ny hanofana lava ny tany avy amin'ny vondrom-piarahamonina Moletele eo an-toerana, ary mandoa hofan-trano isam-bolana amin'ny fiarahamonina ary koa fizarana fidiram-bola ho fidiram-bola fanampiny. Amin'ny faran'ny fampanofana lava dia hiverina hiverina amin'ny fiarahamonina ny trano rehetra ary manana safidy hiara-miasa amin'ny The Royal Portfolio mandrakizay. Mandritra ny fampanofana, ny Royal Portfolio dia hampiasa mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina eo an-toerana ary hampiofana azy ireo amin'ny fenitra avo indrindra amin'ny Royal Portfolio ary koa hampiditra ny vondrom-piarahamonina eo an-toerana amin'ny ezaka fiarovana ny bibidia sarobidy ao amin'ny faritra.
Ny fihenan'ny vola dia manampy hatramin'ny 10% amin'ny sarany miafina amin'ny dia ataon'ny orinasa